चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले केके दिए सुझाव ? « Pahilo News
चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले केके दिए सुझाव ?
प्रकाशित मिति : 23 March, 2017 1:24 pm
१० चैत । चीनको ६ दिने भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा चीन मामिलासम्बन्धी विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले गर्ने द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय भेटवार्ता र आपसी चासोका विषयमा बालुवाटारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विज्ञसँग सुझाव लिएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विज्ञ तथा व्यवसायीलाई स्पष्ट पारिएको जानकारी दिए ।
चीनको हाइनान प्रान्तको बोआओमा यही चैत १० देखि १३ गतेसम्म हुने एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री बिहीबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री महतले दुई देशबीच सहयोगको क्षेत्र कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपालको तयारी पूरा भएको तर अहिले प्राविधिक कारणले सम्झौता भने नहुने छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘दुई देशको कनेक्टिभिटी, कोदारी सडक, स्याफ्रुबेसी मार्ग र वान बेल्ट वान रोड लगायतका विषयमा छलफल भयो ।’
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दुई देशबीच सद्भाव अभिवृद्धि गर्न सम्पूर्ण रुपले ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् भनेर आपूmहरुले सुझाव दिएको बताए । खनालले भने, “दुई देशबीच विकास र सहयोगका धेरै सम्भावना छन् । त्यो सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ । यस बीचमा चिसिन खोजेको भ्रमणलाई न्यानो बनाउन सक्नुभयो भने सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहभागी थिए ।